इटहरीमा नै राजधानी किन ? - १७ पुष २०२६, बिहीबार ००:००, Purbodaya FM
इटहरीमा नै राजधानी किन ?
नेपालको बिभिन्न राजनीतिक काल खण्डमा जनआन्दोलन तथा क्रान्तिहरु हुदै आईरहेका छन् । जस्तै २००७ सालको जहानीय राणा शासनले गरेको अन्यायको लागी नेपाली जनताले हतियार उठाउनु पर्यो । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य तथा वहुदालीय व्यवस्थाको निम्ति जनआन्दोलन भयो । मूलतः २०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा एक खालको उपलब्धीत भयो । वहुदलीय व्यवस्था त आयो नै तर त्यसवाट पनि पूर्ण रुपमा जनताको अधिकार प्राप्त हुनसकेन । जनताको सर्बभौमसत्ता प्राप्त हुन सकेन वा जनताको आफै निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त भएन । जनताको अधिकार राजाको हातमा रहिरहेयो ।जुन श्री ५ को हुकुमद्धारा वक्स हूने अथवा चल्ने पद्धति रहि रहयो । जसको कारण जनता आफै निर्णयक अधिकार सम्पन्न अथवा सार्बभौम अधिकार जनताको हातमा ल्याउनको निम्ति २०५२ सालवाट जनयूद्ध शुरु भयो ।
१० बर्षे जनयूद्धबाट १६/१७ हजार नेपाली जनताले वलिदान दिनका साथै हजारौ वेपत्ता तथा लाखौ नेपाली जनता घाईते,अपाङ्ग हुन पुगे । आज तिनै सहिद,वेपत्ता,घाइतेको बलिदानको कारण नेपाली जनताले मूक्ति पाएका छन् । आज जनयूद्ध, शान्तिबार्ता हुंदै संविधानसभा मार्फत अन्तरिम सरकारद्धारा नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको छ । साथै प्राप्त संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निम्ती स्थानीय तह,प्रदेश सभा र प्रतिनिधीसभाको निर्बाचन सम्पन्न गरि सकेका छौं । स्थान्नीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा तिन वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका साथै संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र संस्थागत हुनका साथै देशमा ७ वटा संघीयसंरचनामा मूलुकले प्रबेश गर्ने अबसर त पायो तर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने ? भन्ने बिषयमा जनताबीच बिभिन्न बादप्रतिबादहरु भईरहेका छन ।
बादप्रतिबादले नै एउटा ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै जनताले यसैगरि बादप्रतिवादमा भाग लिन पाउनु हो । देशभरी चलिरहेको यस्ता जनस्तरका बादप्रतिबादहरु मध्ये प्रदेश नं १ को राजधानी कहाँ रहने ? भन्ने बिषयले यतिबेला चर्चाको बिषय बनेको छ । हामी पूर्वका जनतालाई पूषको चीसो जाडोमा पनि तताई रहेको छ । कसैले धनकुटामा राजधानी हुनुपर्छ भन्दै चक्काजाम समेत गरेका छन । कसैले धरानमा ठीक हुन्छ भनेर तर्कबितर्क गरिरहेका छन । कसैले बिराटनगर भनेर जनता जगाउंदै नाराजुलुस गरिरहेका छन भने कसैले गोठगाउँको बिश्वबिध्यालयमा राख्ने भनेर आबाज उठाई रहेका छन । कतिपयको ब्यबसायिक स्वार्थले काम गरेको छ भने कतिपयले आफनै लींडेढीपीले ताई न तुईका खोंचे थाप्दै राजधानी मागेर ओठतालु सुकाउंदैछन ।
इटहरीबासीले चौतर्फी सोच बनाएर प्रदेश न.१ को राजधानी दाबी गर्दै बिगतदेखि नै संघर्ष चलाउंदै आएका छन । यतिबेला नगरका बौधिक समुदायहरु राजधानी कायम गराउने कुरामा जनता जगाउने मात्र होइन केन्द्रमा रहेको सरकार र दलका नेताहरुको ध्यान आकर्षित गराउन ताँतीका ताँती लागेका छन । चौरस्तामा पर्ने इटहरी नगर राजधानी हुन के कारणले उपयूक्त छ ?भन्नेबारे बिभिन्न छलफलहरु भएका छन । बिद्धान महानुभाबहरुले प्रदेश भित्र पर्ने ओखलढुंगा, सोलु, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, संअुवासभा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा लगायतका जनताकोलागि सहज र पायक पर्ने स्थान इटहरी नै हो भनेर सार्बजानिक रुपमा माग दाबी गर्दा उपरोक्त जिल्लाका जनताले कुनै आपत्ती जनाएका छैनन । यति बेला मौन छन् ।
उनीहरुको त्यो मौनता वस्नुको अर्थले के बुझिन्छ भने इटहरी नै राजधानी बनाउंदा ठिक हुन्छ हुन्छ भन्ने सजिलै बुझिन्छ । हुन त प्रदेश सभाको बहुमतले राजधानी बारे टुङगो लगाउन सक्ने संबैधानिक ब्यबस्था गरेको छ । त्यसमा के कस्तो रिजल्ट आउला? भन्ने अनुमान पनि जो कोहीले गरि सकेका छन । इटहरी सबैतिरका जिल्लाबाट आउने जनताकोलागि पायक पर्ने स्थानमा छ । धनकुटा जस्तो भिरालो जमिन छैन इटहरी । धरान जस्तो सांगुरो पनि छैन इटहरी । बिराटनगर जस्तो छिमेकी देशमा बोर्डर रहेको पनि होइन इटहरी राजधानी बन्नको लागि योग्य र दिर्घकालिन सोच भएको हुनुपर्दछ । किनकी राजधानी धनकुटा आपत्तिको कुरा नरहेतापनि भावि दिनमा सवारीको चाप लाई साँघुरो सडकका कारण धान्न सक्ने अवस्था हुदैन ताकि जनतालाई छिटो छरीतो सेवा सुविधाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । धनकुटा पाहाडि इलाका भएको कारण सडक विस्तार गर्न सजिलो हुदैन । जसमा सडक विस्तारको निम्ती पनि इटहरी योग्य छ हाल इटहरी उत्तर दक्षिण ब्यापक रुपमा ६ लेनको सडक निर्माण भईरहेको छ । बास्तवमै इटहरीलाई भन्नुपर्दा सेन्टर चौवाटो, फराकिलोको हिसाबले उदाहरणका निम्ती इटहरीलाई छिमेकी राष्ट्र भारतको गोहाटी सहरको रुपमा गोहाटी शहर भारतको सेन्टर, चौवाटो, फराकिलो रुपमा चिनिन्छ ।
जस्तै इटहरीलाई पनि नेपालको अधिराज्यभरिकै एक सेन्टर र चौवाटो र विस्तारीत शहरको रुपमा लिन सकिन्छ । विराटनगरः शहर आफैमा विकशित शहरको रुपमा चिनिन्छ । तर पनि राजधानी बनाउनका लागि भने उपयुक्त देखिदैन किनकि विराटनगर दुरीको रुपमा हेर्ने हो भने छिमेकी मुलुक भारतको बोडर नजिक पर्दछ । जुन छिमेकी राष्ट्रको सिमाना नजिक राजधान्नी बनाउँदा भावि दिनमा सुरक्षको खतरा हुन सक्छ साथै राष्ट्रियतामाथिनै खतरा हुन सक्छ तसर्थ १ नं प्रदेशको राजधानी इटहरी उपयूक्त साथसाथै इटहरी फराकिलो र उर्बर भूमी हो । भौतिक संरचना निर्माण गर्नु पर्दा प्रयाप्त जग्गा उपलब्ध हुन सक्छ । निर्माण सामाग्रिको ढुवानी खर्च पनि कम पर्छ । यतायात सुबिधाको कारण मान्छेहरुको आबतजावत प्रयाप्त हुंदा राज्यको आम्दानी बडछ । प्रकतिक बताबरण,पर्याबरणीय क्षेत्र,बनजंगलको नजिक साथै पानीको स्रोत पनि प्रसस्त छ ।
जमिनको माटो राम्रो र बलियो रहेको कुरा भूकम्प जाँदा खेरी इटहरीका कुनै बिल्डीङमा सामान्य असर नपर्नुले पनि पुष्टि गर्छ । जनजीबनलाई आबाश्यक पर्ने साधनस्रोतलाई सजिलो र छिटो ढंगले परिचालन गर्न आबाश्यक यन्त्र उपकरणहरुको उपलब्धता र भण्डारण गर्न कुनै समस्या छैन । ठूलठूला बिल्डीङहरु छन । खेलमैदान छ । पर्यटकहरुलाई घुमफिर गर्न फराकिलोबाटो छ । प्रकृतिक बनजंगल, पानीपोखरी, नदी, तालहरु छन । शिक्षालय र अस्पततालहरुको निर्माणकोलागि प्रर्याप्त खाली जमिनहरु छन । सामाजिकसंघ संस्थाहरु प्रसस्त छन । शान्ती सुरक्षकोलागि सेनाको पूर्बी पृतना हेडक्वाटरअन्तरगत ३ हजारको हराहरीमा सैनिकहरु रहेका छन । शसस्त्र प्रहरी बल गन पकलीमा छ । ट्राफिकको क्षेत्रीय कार्यालय पनि छ । जनतालाई कामको लागि उद्दोग, कलकारखानाहरु पनि प्रसस्त छन । कृर्षी प्लानको जमिन तरहरामा १०५ हेक्टर खाली जमिन रहेको छ ।
ईटहरी पूर्व जुटविकासको जमिन करिब ४५ बिगा खाली रहेको छ । झुम्का पश्चिम हजारौ बिगा खाली रहेको छ साथै खनार दक्षिण पनि हजारौ बिगा खाली जग्गा रहेको छन् । जताततै मनोरञ्नात्मक पिक्निक पार्कहरु छन । जनताहरु संयम र भद्र छन । सामाजिक सदभाव राम्रो छ । होटल ब्यबसाय, सेमिनार, गोष्ठीहलहरु, मठमन्दिरहरु छन । धार्मिक स्थलहरु पनि छन । सामाजिक चेतना भएका सर्बसाधारण महानुभाबहरुबीच कुनै जातीय, धार्मिक, राजनीक द्धेश छैन । चाडपर्ब, रितीरिवाजमा यहाँका जनता एकदमै मिलनसार छन । हिन्दु, मुस्लिम, इसाई, बुद्दिष्ट, जैन, किरात इत्यादी समुदायका आआफना सामाजिक मूल्यमान्यताहरु छन । चाडपर्बहरु छन । सबैमा हार्दिकतापूर्ण सम्बन्ध रहेको छ । त्यसैले इटहरीबासीको यो सदभाव र चरित्रलाई अनुसरण गराउंदै पुरै राष्ट्रलाई जगाएर राष्ट्रिय भावनाको बिकास गराउने अभियानको लागि पनि इटहरीलाई एक नं प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त छ ।
(लेखक इटहरी राजधानी सरोकार समितीका सदस्य साथै, किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका सुनसरी इन्चार्ज हुनुहुन्छ । ९८४२३७२३१७, ९८०४३३५१२९)
८ पुष २०७४, शनिबार ०८:२२ मा प्रकाशित